यौनसम्पर्क गर्दा कसरी पाउने उच्चतम सन्तुष्टी ? जानी राखौ
97700 पटक पढिएको
यौनसम्पर्क गर्दा कसरी पाउने उच्चतम सन्तुष्टी ? यौनजीवनमा सन्तुष्ट नभएका मानिसहरुको दाम्पत्य सम्वन्ध नै असफल भएका कैयन उदाहरण छन् । विभिन्न कारणले यौन वा शारिरिक सम्पर्कका बेला समस्या निम्तने गर्छन् । यसले सन्तुष्टीमा असर पुर्‍याउँछ । गम्भीर सम्भोगका लागि पुरुष–महिला दुबैको शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ ।
स्वस्थ सम्भोगको लागि स्नायु प्रणाली पनि स्वस्थ रहन जरुरी हुन्छ । यसको परिणाम सम्भोग अविस्मरणीय एवं आनन्दित हुन्छ । त्यस्तै, स्वस्थ मुुटु र रक्तसञ्चार प्रणालीले उत्तेजनालाई लामो समयसम्म कायम राख्न सहयोग गर्छ ।
बढि धुम्रपानले यौन क्षमतामा ह्रास ल्याउने थुप्रै अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेका छन् । धुम्रपानले यौन इच्छामा समेत कमी ल्याउँछ । यस्तै अत्यधिक मदिराको सेवनले फेरि स्नायु प्रणालीलाई शिथिल बनाउने काम गर्छ ।
अपर्याप्त निद्राले शरीरको उर्जामा कमी ल्याउने काम गर्छ । यसले गर्दा शारीरिक कमजोरीको पनि महसुस हुन्छ । त्यति मात्र होइन, पुरा ननिदाउँदा टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको सक्रियतामा कमी आउँछ र यौन क्षमतामा नकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले गहन सम्भागको लागि गहन निद्रा पनि महत्वपूर्ण छ । एजेन्सीको सहयोगमा
नेपालमा लुतो फाल्ने चलन हराउँदै